थाहा खबर: वाम गठबन्धनको जितबारे बोल्न चाहेनन् केपी ओली, पत्रकारको प्रश्नमा दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौं : देभरबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रममा छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा वाम गठबन्धन बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरै ठाउँमा जित हासिल गरेका छन्। वाम गठबन्धनका मुख्य सूत्रधार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी परिणाम आउदै गर्दा आइतबार दिउँसो ललितपुरको नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलको निरीक्षण गर्न गएका थिए।
अध्यक्ष ओली जाने कार्यक्रम भनेपछि पत्रकारहरु जाने नै भए। ओली जानुपूर्व नै पुगिसकेका पत्रकारहरु ओली हस्पिटलमा पुगेपछि उनलाई पछ्याइरहे। अस्पताल सञ्चालक गैर आवासीय नेपाली डा. उपेन्द्र महतोले अस्पतालबारे ओलीलाई ब्रिफिङ गरे। अस्पताल निरीक्षणपछि अध्यक्ष ओली औपचारिक कार्यक्रममा पुगे। औपचारिक कार्यक्रममा अस्पताल प्रशासनले अस्पतालबारेमा जानकारी दियो भने ओलीले समग्र स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर भनाइ राखे।
औपचारिक कार्यक्रम सकेर फर्किँदा पत्रकारहरु ओलीलाई कुरिरहेका थिए। उनीहरु वाम गठबन्धनको जितबारे ओलीको भनाइ जान्न व्यग्र थिए। उनी आउनेवित्तिकै पत्रकारहरुले राजनीतिक प्रश्न राखिहाले, -अध्यक्षज्यू वाम गठबन्धनले देशव्यापी रुपमा २ तिहाई ल्याउने सम्भावना देखिएको छ। अब सरकार निर्माणको प्रोसेस अगाडि बढ्छ होला। सरकार गठनको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउनुुहुन्छ? तपाईं यो गठबन्धनको कमाण्डर हुनुहुन्छ। प्रतिउत्तरमा अध्यक्ष ओलीले भने 'मैले यो हस्पिटलको स्थापनालाई सकारात्मक ढंगले राम्ररी लिएको छु। यसको उन्नति, प्रगति, सफलता होस्। यसले बिरामीलाई राम्रो उपचार गरेको मैले पाएको छु, र म यस हस्पिटलको सफलताको कामना गरेको छु। मैले भनेको छु मेरो तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग हुन्छ।'
पत्रकारले अर्को प्रश्न फेरि गरिहाले 'तपाइ त (वाम गठबन्धनको) मियोको रुपमा हुनुहुन्छ। देशब्यापी रुपमा वामपन्थीले जितिरहेको छ। अब देश कसरी अगाडि बढ्छ? ओलीले फेरि भने 'नेपाललाई मेडिकल हव, एजुकेशन हवको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यस दिशामा यस हस्पिटलले महत्वपूर्ण काम गर्न सकोस्।'
त्यसो भए के अब ठूला नेताहरु विदेश जानबाट रोकिन्छन्? यो हस्पिटलले त्यस्तो किसिमको सेवा दिने महसुस गर्नुभएको छ? त्यसपछि पत्रकारले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा नैप्रश्न गरे। ओलीले जवाफ फर्काइहाले 'तपाईंहरुले ठूला नेतामा जानुभयो। सक्नेले सकेसम्म बाँच्न खोज्छ र विदेश गएर उपचार गराउँछ। नेताहरुले मात्रै होइन अरु पनि।'
पैसा नहुँदैमा उपचार नरोकियोस्
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपचार खर्च नभएको बिरामीको पनि अस्पतालले उपचार रोक्न नहुने बताएका छन्। ललितपुरको नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलको निरीक्षण गर्दै नेता ओलीले उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन्। 'धरौटी राख्ने पैसा नभएका कारण कुनै पनि बिरामी मर्नु नपरोस्। यस्तो समस्या मैले पनि भोगेको छु' उनले भने, 'पहिले उपचारर त्यसपछि पैसा भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुस्।'
उनले बिरामीको उपचार पहिले गर्ने कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गरे। 'लिनेमा भन्दा दिनेमा ध्यान दिनुस्। पहिले मान्छे बाँच्नुपर्‍यो' उनले भने, 'उपचार पहिले भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुस्।' धेरै बिरामी समयमा रोग पत्ता नलाग्दा समस्या भोग्नुपरेको भन्दै बिरामीको रोग के हो भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने ओलीले बताए।
ओलीले नेपाललाई स्वाथ्य क्षेत्रको हव बनाउन सकिने र त्यसका लागि उक्त अस्पतालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेसमेत बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मिर्गौलाका बिरामीको डाइलोसिस निःशुल्क गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले केही जिल्लामा नमुना रुपमा स्वास्थ्य विमा शुरु गरिएको बताए।
काठमाडौंमा बढेको प्रदुषण नियन्त्रण गर्न पनि कदम चाल्ने ओलीले बताए। 'काठमाडौंमा अहिले अलिकति बढी प्रदुषण छ। सडक बिस्तार तथा मेलम्ची पानीको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका कारण' उनले भने, 'यसलाई हामी छिट्टै नियन्त्रण गर्छौ।'
नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलका अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतोले मेडिसिटी एउटा हस्पिटल मात्र नभएर एकजना बिरामी पनि उपचार नपाएर मर्न नपरोस् भन्नका निम्ति खोलिएको बताए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकसित रुप दिनुपर्ने उनले बताए।
त्यस अवसरमा हस्पिटलको बारेमा जानकारी दिदै हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधाकर जयरामले विश्वस्तरीय प्रविधियुक्त हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए। ३५० शैय्याबाट शुरु गरिएको हस्पिटलमा विदेशमा हुने सबैखाले उपचार गर्न सकिने बताउदै जयरामले हस्पिटललाई ७५० बेडको बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।